Hlela i-Wiki Hlela-a-thon ye-NMWA Goal Virtual, egxila kwabafazi boMbala - Ubugcisa
Eyona Ubugcisa IMyuziyam yeSizwe yaBasetyhini kubuGcisa bokubamba iWiki Hlela-a-thon egxile kwabafazi boMbala
IMyuziyam yeSizwe yaBasetyhini kubuGcisa bokubamba iWiki Hlela-a-thon egxile kwabafazi boMbala
UAlison Saar, Iibhafu zebhafu , 2000. Iphepha lomthi kwiPhepha.UAlison Saar / uMyuziyam weSizwe waBasetyhini kwezoBugcisa
Ukuba umculi akanalo iphepha le-Wikipedia, ngaba ukhona? Intyilalwazi edumileyo ekwi-intanethi ilawula ukukhangela kuGoogle. Abadlali behlabathi bobugcisa obukhulu njengeemyuziyam kunye neegalari zisebenzisa umxholo wayo. Kodwa iwebhusayithi ayibonisi umfanekiso opheleleyo-kuphela malunga neepesenti ezingama-20 zabahleli bevolontiya beWikipedia ngabasetyhini kwaye ngenxa yoko, kukho amaphepha ambalwa kakhulu malunga namagcisa amabhinqa.
Xa i-cis kunye nabasetyhini abadlulayo, abantu abangafanelanga ukubambelela, abantu bebala, kunye noluntu lwaseMthonyama abamelekanga ekubhaleni nasekuhleleni indawo [yesixhenxe] -eyona ndawo ityelelweyo emhlabeni, ulwazi malunga nabantu abanjengathi luye lubhenqwe kwaye luthethwe kakubi, amabango Ubugcisa + Ubufazi Umbutho ongenzi nzuzo owasekwa ngo-2014 ukuya ku ukulungisa umsantsa wesini kwi-Wikipedia yokugubungela amagcisa amabhinqa . Amabali ayaphazama. Siphulukana nembali yokwenyani.
BONA KWAKHO: Nceda umceli mngeni # 5WomenArtists Imidiya yokuNxibelelana ukuze uphumelele… Ngokwenza ukuba kungafuneki
Ubugcisa + besini buququzelela i-Wikipedia ukuhlela-a-thons-kwimisitho yomntu ozama ukukhupha ukungalingani kwi-Intanethi, ngakumbi njengoko abantu besanda amava kubugcisa kwiwebhu. Amatshantliziyo edijithali adibana kwindawo ethile exhotyiswe ngeelaptops, amashwamshwam kunye nemithombo yolwazi ehloniphekileyo, elungele ukomeleza iiprofayili zeWikipedia esele zikhona okanye ukwenza ezintsha. Ngaphezulu kwe-18,000 yabantu kwiziganeko ezili-1,260 kwihlabathi liphela ezithathe inxaxheba ukuza kuthi ga ngoku, zikhokelela ekudalweni nasekuphuculweni phantse kwamaphepha angama-84,000 eWikipedia.
Ngoku, ngenxa yecoronavirus, ezi ziganeko zisenzeka kodwa ziye zatshintshela ekubeni kwi-intanethi ngokupheleleyo. Olunye uncedo ngeli xesha sikulo ngoku kukuba indawo ebonakalayo ayisiyo isithintelo sokuthatha inxaxheba, utshilo uKira Wisniewski, umlawuli olawulayo weArt + Feminism.Umjongi. Umsebenzi wokuhlela iWikipedia kunye neWikidata usenzeka ngexesha lobhubhane.
I-Pre-COVID, ukuhlela-iitoni kwenzeka kwiimyuziyam ezinkulu ezinje nge IMyuziyam yaseNew York yobuGcisa bemihla ngemihla , Tate London, Los Angeles County Museum of Art, kunye ne Smithsonian American Art Museum. IMyuziyam kaZwelonke yaBasetyhini kwezobuGcisa (i-NMWA) eWashington D.C. ibibamba minyaka le ukusukela ngo-2014. Mwangi Hutter, Iimpawu zoLusu , 2008. Ukushicilelwa kombala weChromogenic kwialuminium.UMwangi Hutter / uMyuziyam weSizwe waBasetyhini kwezobuGcisa
I-NMWA ngoku ikulungele ukusingatha i-8th yayo hlela-itoni ngo-Agasti 11 —Ukude. Kwaye kulo nyaka imyuziyam ijolise kubazobi abanemvelaphi yaseAfrika imisebenzi yabo yobugcisa ibandakanyiwe kwingqokelela yayo.
Olu luhlelo lwe-Wikimedia ukuhlela-a-thon kubalulekile kuthi ukuba sivavanye ngokusondeleyo ukubanjwa kwethu ngabazobi abanemvelaphi yase-Afrika-ukuze sifunde ngakumbi ngamagcisa emisebenzi yawo ibandakanyiwe kwingqokelela kwaye icacise apho kufuneka someleze kwaye sicebise ukubamba kwethu, utshilo uKatie Wat usekela mlawuli wezobuGcisa, iiNkqubo kunye nokuzibandakanya koLuntu kwi-NMWA.
Abanye babazobi ababekelwe iiseshoni ezikude sele benamaphepha e-Wikipedia, anje nge UAmy Sherald , UAlison Saar , UZanele Muholi , UNellie Mae Rowe , Chakaia Booker , U-Ingrid Mwangi , kunye Amalia amaki . Kodwa bambalwa abanalo ungeniso konke konke, njengomshicileli uDelita Martin kunye nomculi weencwadi uTia Blassingame. Sonya Clark, Afro Abe 2, 2012. Iibhili ezintlanu zedola kunye nomtya omfakamfele ngesandla.Ifoto nguLee Stalsworth; ngoncedo / uMyuziyam weSizwe waBasetyhini kwezobuGcisa
Kwaye, ngokukodwa, uninzi lwala magcisa angentla awunalo ungeniso kwiziko ledatha le-NMWA nokuba, nangona umsebenzi wabo ubanjelwe kwimyuziyam. Ukunqongophala kokubonakala kwidijithali-mhlawumbi ngakumbi kumagcisa ombala-akuyeki ukuba yingxaki xa umzobi engena kwingqokelela yemyuziyam esisigxina.
Ndiyathemba ukuba umsitho uza kwenza kube lula ukukhangela kwiwebhu kangangoko ukufumana umsebenzi wamagcisa afakiwe ku-thon yalo nyaka, njenge Iprojekthi yeCraft Craft ye Sonya Clark , URenée Stout ’s ufakelo, okanye imizobo emikhulu enemibala ye UMildred Thompson .
[AbaseTyhini] badinga amathuba emisebenzi yabo ukuba yintshatsheli, wongeza uWat. Ukuqhuba kunye nokugcina le meko inyukayo iyakuthatha ukuzibophelela kwabaxhasi, iimyuziyam kunye nabagcini kwihlabathi liphela.
'IBridgerton' Cast Theorize malunga nokuza kwiXesha lesi-2
UDylan Sprouse kunye noBarbara Palvin Bethelela nje iMilestone yoBudlelwane obukhulu
U-Elon Musk utyhila isizathu sokuqhuma kovavanyo olumangalisayo lwe-Starship SN11
I-Dean kunye neDeLuca ivula kwiLitye elinye
U-Masha gessen uphononongo olutsha lwe-york lweencwadi
igama leemfazwe zeenkwenkwezi ezilandelayo
Ungaba njani yipolyathmath
zingaphi iziqendu ezikwi-flash
Ivenkile yekofu ecaleni kwam ngewifi